Created on Monday, 07 January 2019 14:39
जब म काठमान्डु हावाइजहाजबाट अवतरण हुन्छु संबिधान राम्रो बनेन भनेर चिन्ता लाग्दैन । नेताले केही गरेनन भनेर पनि चिन्ता लाग्दैन । मलाई जग्गा र सुनको भाउ, र बैंकमा राखेको पैसाको ब्याजदर घटेछ भनेर चिन्ता लाग्दैन । परिवारका सदस्यहरुको डिमान्ड अनुसारको कोशेली ल्याउन सकिन कि भनेर पनि चिन्ता लाग्दैन ।
यि सबैको बारेमा चिन्ता गर्ने त तपाईंहरु जस्ता धेरै हुनुहुन्छ। सबैले गर्ने चिन्ताका बिषयहरुमा म किन चिन्तित भईराख्न पर्‍यो र ! त्यसैले म धेरै कमैले चिन्ता गर्ने बिषयमा चिन्तित छु ।
जैले पनि काठमान्डु अवतरण हुन्छु एउटै कुराले चिन्तित बन्छु । काठमान्डुको प्रदुषित बातावरणले । गत ६ नोभेम्बर २०१८ तारिखमा काठमान्डौ बिमानस्थल ओर्लें । सौचालय प्रयोग गर्न पर्ने भयो । नाक छोप्दै भित्र पसें । मैले गरेको सबै दिसा पिसाब आखिरमा बाग्मतीमा त बगेर जाने हो भनेर दुख्ख लाग्यो । हात धुन धारा खोलें । पहेंलोपहेंलो रङगको पानी आयो । मेलम्ची आउँदैछ भनेर चित्त बुझाएँ ।
ट्याक्सि चढेर घरतिर लागें बाटोमा उडदै गरेको धुलो र धुवाँ पन्छाउँदै । बागम्तीको पुल काट्दा नदिले बगाएर ल्याएको ढल र त्याँहाबाट उत्सर्जित गन्धले ह्वास्सै नाकलाई हान्यो । अगी सौचालय पसेको याद आयो । सडकपेटी छेउँ भएर बग्ने ढल र थुपारिएका फोहोर मैलातिर अनायासै आँखा तेर्सिय । केही अधबैँसे केटाहरु नाङगै हातले प्लस्टिक, कार्डबोर्ड, र सिसालाई छुट्ट्याउँदै मिनी ट्रकमा लोड गर्दैथिए । कवाडिमा लगेर बेच्न हो कि ल्यान्डफिल साइटमा फाल्न हो । उनिहरु प्लास्टिक, मेटल बेच्ने खाते केटाहरु थिए कि नगरपालिकाका फोहर ब्याबस्थापनका कर्मचारी थिए, छुट्ट्यान सकिन । त्यो द्रिश्यले पनि मन दुखित तुल्ल्यायो ।
पछी सुनेँ, उपत्यकाको एक मात्रै फोहोर बिसर्जन स्थल ओखरपौवा ल्यान्डफिल साइटबाट बग्ने लिचेटले जलासय, जलचर र गाउँलेलाई पारेको असर। त्याहाँबाट उत्सर्जित मिथेन ग्यासले वोरिपरिको वायुमन्डलमा झनै कस्तो नकारात्मक प्रभाव पारेको होला भनेर अड्कल काटें । भुइँतिर लत्रिरहेका बिजुली र टेलिफोनका तार, थोत्रा होर्डिङबोर्ड, उद्रिसकेका भित्तेलेखन र पर्चाहरुजस्ता द्रिस्य प्रदुशणहरुप्रती मेरा आँखा फेरी परे । कानै खाने गरी चिच्याउने गाडीका हर्न; रातमा निस्कने गल्लिका कुकुरका निरन्तर हाउँहाउँ; विवाह, नेताका भाषण, र पूजा जस्ता कार्यक्रमबाट निस्कने माइकका ध्वानी प्रदुशणप्रती पनि मेरा कान ठडिए ।
म काठमाडौं ओर्लेको एक दिन हुन पाएको हुँदैन मेरा शरीरका सबै ज्ञानिन्द्रियहरु सिथिल हुन्छन । अनी त म अती चिन्तित बन्छु यस्ता वातावरणिय प्रदुशणलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ होला भनेर ।
अघिल्ला नेपाल भ्रमणहरुमा निस्कंदा पनि यस्तै अनुभवले चिन्तित तुल्याउँथ्यो । यस पटक पनि खुबै चिन्तित भएँ । तर अैले आएर मेरा चिन्ता अली पर सरेकाछन । कारण मेरा चिन्तालाई अली बिसेक गराइदिनसक्ने मान्छेहरुलाई भेटेर आएको छु । यति भएपछी अब काठमान्डु अनी समग्र नेपालको बातावरण सम्रक्षण, प्रबर्धन, र सुधारमा केही टेवा पुर्याछउन सक्छु भन्ने लागेको छ । बेलायतको एन्भायरोमेन्ट एजेन्सिमा बसेर कमाएको सिप र अनुभवलाई आफ्नो राष्ट्रको सेवामा अर्पिन सक्छु भन्ने ठानेर फर्केको छु । बेलायतको बातावरण ब्याबस्थापनको मोडललाई सर्लक्कै नेपालमा लगेर लागु गराउन सकिन्छ कि र यस कार्यमा सबैको साथ पाईन्छ कि भन्ने आत्मबिश्वास जगाएर म मेरो छुट्टी सिध्याएर कर्मभुमी फर्केको छु ।
यसै सिलसिलामा गत अक्टोबर महिनामा बन तथा बातावरण मन्त्री शक्ती बस्नेत ज्युसँग नेपाली राजदुतावास लन्डनमा भेटवार्ता भयो । आउनुस नेपाल र भेट गरौं भनेर आस्वासन दिनुभयो । काठमान्डु ओर्लेको केही दिनपछी पर्याबरण रेडियोमा अन्तरवार्ता मिलाइदिनु भयो साहित्यकार मित्र बम बानियाले । रेडियोमा भेटभयो कार्यक्रम संचालक नवराज संजाल र डाइरेक्टर ड. अस्तमान महर्जनसँग । एक घण्टा बातावरणकै बिषयमा केन्द्रित रहेर मेरो अन्तरवार्ता भयो ।
पछी बातावरण कानुनबिद तथा बातावरण सम्रक्षणका अभियान्ता अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेस्टसँग भेटहुने सौभाग्य मिल्यो । नेपालमा बातावरण कानुन नै छैन होला भनेको त एक सय चार कानुनहरु रहेछन । वाँहाले बातावरणिय समस्याहरुमा उध्योग तथा सरकारलाई मुद्दा हालेर धेरै मुद्दा जितिसक्नु भएको रहेछ । अदालतले धेरै मुद्दालाई जिताइसकेको तर सरकारबाट कार्यनयन हुन नसकेका गुनाशाहरु मलाई पोख्नुभयो । आवश्यक स्रोत र साधन नै छैनन् कसरी अदालतको फैसलालाई कार्यनयन होस त ! बातावरण प्रबन्धनमा बैज्ञानिक ज्ञान, दक्ष्य शिप, र अत्याधुनिक प्रबिधिको आवश्यकता पर्छ । त्यो अवस्था अझै नेपालमा बिकास न भैसकेकोले फैसला कार्यनयन हुन गाहरो छ मैले भने । वाँहाले मनन गर्नुभयो ।
त्यसपछी पदम जिले बातावरण बिभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी, शाखा प्रमुख बुद्दीराज घिमिरे, र अन्य दस बातावरण निरिक्षकहरुसँग मेरो भेटघाट कार्यक्रम जुराइदिनुभयो । नेपालको बातावरण कानुन, यसको कार्यनयन, र बातावरण ब्याबस्थापनका बिषयबस्तुमा हाम्रो छलफल भयो । बातावरण निरिक्षकहरुसँग एक छुट्टै अन्तरकृया गरें । बेलायतको मेरो बातावरण ब्याबस्थापनको अनुभव सुनाएँ । उनिहरुको पनि मज्जाले सुनें । चार बर्ष मात्रै भएको रहेछ बातावरण बिभाग स्थापना गरिएको । बिचरा कान्छै रहेछ। तर बातावरणलाई जोगाउन हर प्रयासमा लागेको पाएँ याँहा कर्मचारीहरु । जम्मा १६ जना रहेछन नेपाल अधिराज्य भरिका लागि बातावरण निरिक्षक । यि निरिक्षकहरु सरकारी कर्मचारी छनौट बिधी लोकसेवा उत्तिर्ण भएर यो बिभागमा आउनुहुँदो रहेछ। प्राय सबैको बातावरण बिज्ञानमा मास्टर डिग्री हुँदोरहेछ तर त्यससम्बन्धी कुनै तालिम हुँदो नरहेछ । कामकै सिलसिलामा आफै सिक्दै जानुपर्दो रहेछ । बातावरण बिभागले अनुसन्धान गरेर निकालेको निस्कर्श बातावरण मन्त्रालयमा बुझाईँदो रहेछ । तर तालमेलको कमजोरिले धेरै बिषयहरु कार्यनयन हुन नसकेको गुनासो मलाई अवगत भयो । यो समस्या पनि काठामान्डु धुलाम्य हुनाका कारण र जिम्मेवार निकाय सडक बिभागले खानेपानी र खानेपानीले सडक बिभागलाई लगाए जस्तै हुन सक्ने मलाई लाग्यो
काठमाण्डुमा पानीको समस्या छ तर मेलम्ची आउँदै छ । लोडसेडिङको समस्या थियो, कुलमान घिसिङको कुसल ब्याबस्थापनले समस्या हरण भएको छ । अब काठमान्डुको फोहर ब्याबस्थापनकालागि एक अर्को कुलमान जन्मनु परेकोछ ।
बाटोघाटो र यातायातको समस्या छ, तर जहाज र रेल आउँदैछ । द्रुत मार्ग, सुरुङ, र पहाडी लोक मार्गहरु बन्दैछन । राजनैतिक हक र अधिकारका समस्या थिए, ल्याइयो सङ्घियता । जसले ल्याउँदैछ आर्थिक सम्ब्रिदी पनि । तर बातावरणिय अवस्था छय हुँदै गैरहेको पाएँ । तर मेरो बसाइमा पाउन सकिन यस्तो कुनै परीयोजना जसले बातावरणिय समस्यालाई सुल्झाओस । आर्थिक बिकास र बातावरण सम्रक्षणका कार्यलाई सँगसँगै लगिनपर्छ । अर्थात दिगो बिकास । नेपालमा त्यसो भएको देखिदैन । अर्थिक बिकासको नाममा सडक, भवन, बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरु, हावाइजहाज ग्राउन्ड, टेलिकम्युनिकेसनका सम्रचनाहरु धमाधम बन्दैछन ।तर ल्यान्डफिल साइट, ढल र ढल प्रसोधन केन्द्र, फोहरमैला ब्यबस्थापनका सम्रचनाहरु बनेका छैनन ।
केही हप्ता पस्चात पदम जि को अगुवाइमा नेपाल बार एसोसियसनको बातावरण कानुन समितीको आयोजनामा एक अन्तरकृया राखियो । कार्यक्रममा प्रदेश ३ का बातावरण मन्त्री, पूर्व बन तथा बातावरण मन्त्री, काठमान्डु महानगरपालिकाका बातावरण बिभाग प्रमुख, अन्य बातावरण कानुन बिद्द, र बातावरण बिग्य जस्ता ब्याक्तिहरुसँग मेरो भेटवार्ता भयो । बिग्रंदो बातावरणसँग सबैजना सचेत, सुधारनुपर्छ भन्ने कुरामा सबैको चाँसो देखें । तर यस सम्बन्धी खासै कुनै ठोंस निती तथा योजना निर्धारीत नभैसको बुझ्दा मन खिन्न भएर आयो । तर सबैको यो भन्दा अगाडिको जनयुद्द र अस्थिर सरकारप्रती दोष, र अैलेको एमाले मावोबादि गठबन्धनको स्थिर सरकारप्रती सबैको आषा भरोषा पलाएको पाउँदा खुशी लाग्यो ।
यसरी यि भेटघाट र अन्तरकृयाहरुमा अरुका बिचराहरु सुनें । मेरा भनाइहरु पनि राखें । मैले भनेको पुग्ला नपुग्ला हेर्दै जाउँला । बेलायतको लागि नेपाली दुतावास, म आँफै काम गर्ने सरकारी बिभाग एन्भाएरोमेन्ट एजेन्सी, बेलायतको अन्तरराष्ट्रिय बिकास बिभाग, एनआरएन बेलायत इत्यादी संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गर्दै बातावरण प्रबन्धनमा चाहिने टेक्नोलोजी नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । जसरी शिक्षा, स्वास्थ्य, साहित्य, र राजनैतिक क्षेत्रमा नेपाल र बेलायतबिच अनुभव साटासाट हुँदैआएको पाईन्छ त्यस्तै बातावरणको क्षेत्रमा पनि बिग्य तथा कर्मचारीहरुको आदानप्रदान र प्रशिक्षण तथा तालिमको ब्याबस्था मिलाउन सकिन्छ ।
हामीले बर्षको दुईतीन सय गोर्खाली सिपाही बेलायतलाई दिंदा दुईतीन जना बातावरण बिग्य देउ न हामीलाई पनि भनेर बेलायती सरकारलाई गुहार्न सकिन्न र ! नेपालकी महिला मन्त्री आएर बेलायतको पार्लियामेन्टमा महिला हकअधिकार र हिन्साको बारेमा बोल्दा बेलायतको बातावरण मन्त्री नेपालको सन्सदमा उब्ब्याएर बागमती प्रदुशण हुन नदिन ढल कसरी प्रसोधन गरिनपर्छ भन्ने बिषयमा प्रबचनको मेसो मिलाउन सकिन्न र ! अन्तरराष्ट्रिय बिकास बिभागले ताप्लेजुङ्कको खोलामा झोलुङे पुल हालिदिंदा काठमान्डुमा उत्पादन हुने महिलालाई डढाएर बिजुली निकाल्ने प्रब्रिधी जडान गरिदिन्छौ की भन्ने कुराको माग राख्न सकिन्छ । मानवअधिकारको सङ्ख फुक्दा बातावरण अधिकारका बिषयमा पनि नेपाली जनतालाई चेतना दिलाइदिन्छौ की भनेर सोधी हेर्नसकिन्छ । यि सबैकुरा सरकारी स्थरमा गरियो भने प्रभावकारी हुनसक्छ । यसैको लागि सर्बप्रथम नेपाली दुतावासलाई मेरा यि कुराहरु राख्न जाने योजना गरेकोछु ।
मलाई यस्तै यस्तै बिषयले चिन्तित तुल्याउन्छ। तर अन्य धेरै कुराले नेपाल भ्रमण रमाईलो पनि लाग्छ । न्यानो मौसम, मिजासिला मान्छे, स्वादिलो खाना, सुन्दर प्रक्रिती, स्वर्ग झैं लाग्ने हिमस्रिङ्गखला, स्वाक्ष्य गाउँले परीबेश, समथर मधेस, छङ्छङ् गर्दै बग्ने नदीनाला, मनै लोब्याउने राष्ट्रिय निकुन्ज र हिम्स्रक तर लोपान्मुख बन्यजन्तु मलाई औधी मन पर्ने बिषय हुन ।
अब आशा गर्छु केही दसकपछी नेपालको वातावरणिय समस्याहरुले मेरो मन यसरी कुँडिन्नहोला ।
(लेखक बातावरण बिज्ञानमा स्नाकोत्तर गरेर बेलायतको बातावरण बिभागमा कार्यरत हुनुहुन्छ)